Iza moa i Azazela ao amin'ny Baiboly sy ny angano?
Azazel dia anjely lavo
Iray tamin'ireo mponina malaza any amin'ny afobe ny demony Azazel, izay fantatra tamin'ny andro fahiny. Ireo prototypes amin'io fisiana io dia hita amin'ny kolontsaina samihafa. Misy aza fombafomba manokana mahagaga izay ampiasain'ireo majika mainty noho ny famotsorana azy.
Iza moa i Azazela?
Ny toetra ratsy ateraky ny angano jiosy Semitika sy jiosy dia Azazela demônika. Tamin'ny andro fahiny, mba hanonerana ny fahotan'izy ireo, dia nentina nankany an-tany efitr'osy ny osy. Azazel dia demony mpikomy, izay misolo tena ao amin'ny Bokin'i Enoka. Milaza izy fa ilay anjely dia namadika an 'Andriamanitra, ary noroahina avy tany an-danitra izy. Ny antony nahatonga an'i Azazela ho tsy nankasitraka ny Avo Indrindra, dia mifandray amin'ny tsy fankatoavana. Nangataka ny hiantso ny olona voalohany eto an-tany ny Tompo, saingy tsy nety izy, satria noheveriny fa i Adama dia ambany noho ny anjely.
Indray mandeha izy dia nampianatra ny lehilahy mba hanao fitaovam-piadiana sy hiady, ary ny vehivavy - handoko sy hiteraka. Ireo hetsika nataon'izy ireo Azazel dia nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra, izay nandidy an'i Raphael mba hamatotra ny rojo, ary tamin'ny andron'ny fitsarana farany dia natsipy tao anaty afo izy. Ao amin'ny loharano sasantsasany dia olona iray i Azazel sy Losifera . Manondro ny fisehoan'i Azazela, dia asehon'ny dragona iray izay manana tànana sy tongotra ary elatra 12 izy. Ny endriky ny endrik'ity demony ity dia ahitana ny orona niposaka, izay araka ny angano efa nisy azy ho sazy, taorian'ny nanesorana azy avy any an-danitra ary lasa anjely lavo.
Ny mariky ny Azazela
Raha te hiantso demony iray ianao, dia tsy maintsy ataonao eo amin'ny tany na eo ambanin'ny sehatra marika manokana, izay antsoina hoe marika famantarana an'i Azazela, fa heverina ho ny sata satira ihany koa. Maneho ny tenany izy fa ny fihetsiky ny olona iray dia taratry ny toetrany ara-panahy. Ny hasarobidin'ny zava-drehetra eto an-tany dia tapa-kevitra ny fanahy, izay tsy maintsy manaiky izay zava-dehibe, ary inona no tsara kokoa handa. Na dia anjelin'ny fandringanana aza i Azazela dia manampy amin'ny fampisehoana ny hery anaty ao anatiny ny marika famantarana azy, ary rehefa mampiasa azy io, dia afaka mahita ny raharahany manokana ny olona iray mba hisaintsaina ny fisiany anatiny.
Iza moa i Azazela ao amin'ny Baiboly?
Ny fanamarihana an'io demony mampihoron-koditra io dia azo jerena ao amin'ny boky manan-danja indrindra ho an'ny Kristiana amin'ny teny manodidina ny famaritana ny "andron'ny fanavotana". Misongadina amin'ny fombafomba mifandraika amin'izany izy, izay midika fa androany dia ilaina ny mitondra sorona roa: ny iray dia natao ho an'i Jehovah, ary ny iray kosa ho an'i Azazela. Noho izany, nifidy osy roa ny olona, ​​izay nanovan'ny olona ny fahotan'izy ireo. Hatramin'ny nandosiran'ilay anjely lavo Azazela, araka ny fanazavana, niaina tany an-tany efitra, dia nentina tany ny tra-boina. Avy eto dia nisy anarana iray hafa - Tompon'ny Lanitra.
Azazel amin'ny finoana silamo
Ao amin'io fivavahana io, ilay anjelin'ny fahafatesana dia Azrael na Azazela, izay, araka ny baikon'i Allah, dia tokony hanaisotra ny fanahin'ny olona alohan'ny hahafatesany. Ao amin'ny finoana silamo dia nomena fijery maro io toetra io, satria izy dia iray amin'ireo anjely efatra izay akaiky an'i Allah. Sarobidy ny manamarika fa tsy ao amin'ny CORAN ny demony azazela, fa ny mpanaraka ny silamo rehetra dia miresaka momba azy. Eo ambany fitarihany dia mpanompo mahatokin'ny maro izay mikatsaka ny hanatanteraka tontolo hafa amin'ny marina sy ny mpanota.
Mahaliana fa mitovy amin'ny endriky ny anjely kerobima i Azraela, izay manana elatra efatra. Ao amin'ny famaritana ny Fitsarana Farany dia naseho, talohan'ity hetsika goavana ity, dia hatsipy ao amin'ny tandroka Israelfail izy, ka noho izany dia saiky maty avokoa ireo zavaboarin'i Allah, ary rehefa mandre feo faharoa ny anjomara, dia ho lasa ny anjely, ary i Azraela dia ho faty amin'ny farany. Ny Miozolomana dia mihevitra fa manana maso maro i Azazel ao amin'ny finoana silamo.
Azazela amin'ny angano
Ireo mpikaroka dia nahita fikarohana maro be momba io demony io tamin'ny anganongan'ny firenena samihafa.
Matetika dia ny mpiaro ny lainga, ny faharatsiana ary ny fahatezerana.
Hitanao hoe iza amin'i Azazela no angano, tsara ny manamarika fa amin'ny angano sasany dia antsoina hoe mpanafatra ambony ny tafika tsy misy mpanohitra izy ary iray amin'ireo andrian'ny Hell.
Ny mpikaroka sasany dia mampifandray ny fiaviany amin'ny andriamanitry ny biby semitika.
Ao amin'ny asan'ny maizina, i Azazela dia voantso hitarika herisetra amin'ny lehilahy, ary amin'ny vehivavy - zava-poana. Ny devoly iray hafa dia manampy amin'ny fanaovana fifandirana eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana ary heverina ho toy ny incubus.
Solika eoropeanina - inona izany ary ahoana no mitranga?
Mpitsabo matihanina Alexander
Andriamanitra avy any an-tendrombohitra
Ny andriamanibavy Venus amin'ny angano grika - iza izy sy izay nanindrahindra?
Amin'ny nofinofy ara-paminaniana nofinofy?
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpamosavy?
Coronavirus amin'ny alika
Rehefa be zotom-po amin'ny zaza ny fontanel, nahoana no ilaina, ary ahoana no ahafantarana ny tsy fetezana?
Baolina any an-trano
Salmon miaraka amin'ny holatra
Cartoon ho an'ny ankizy 4 taona
Asidra Nicotinic amin'ny tarehy
Ny fitsikerana chronic - soritr'aretina
Toeram-pisakafoanana misy fitaratra
Enti-manaloka ny fototry ny lymphoma ao am-poana
Metrorrhagia - Antony
Jeans miaraka amin'ny tavy ambony
Inona no gluten ary inona no manimba?
28 kintana Hollywood manan-tsaina indrindra